Sioka avy any Beirota: Andro faharoa tamin’ny Atrikasan’ny Bilaogera Arabo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Septambra 2018 1:23 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Swahili, বাংলা, English
Nanomboka tamin'ny famelabelarana momba ny Herdict Web ny andro faharoa tamin'ny Atrikasan'ny Bilaogera Arabo, tranonkala iray izay mampiasa ny crowdsourcing mba hanangonana ny tatitra momba ny sivana amin'ny aterineto avy amin'ireo mpisera manerantany. Nisioka sary iray avy amin'ity famelabelarana ity ny mpandray anjara Qatari tamin'ny atrikasa Muhammad Basheer :
Nisioka momba ny Herdict i Muhammad Basheer
Taorian'ny famelabelarana voalohany, niresaka momba ny teknolojian'ny tontolo Arabo ilay bilaogera Egyptiana Manal, indrindra ny mikasika ireo vehivavy mahay teknolojia ao Egypta. Nanamarika ilay Libaney NightS fa mila vehivavy maro ny ao amin'ny # ab09:
Miantso ireo vehivavy maro mahay teknolojia i NightS, tokony ho mafy feo kokoa ny vehivavy
Taorian'ny famelabelarana fampahafantarana natolotr'i Manal, nizarazara ho vondrona atrikasa ny bilaogera ary nifantoka tamin'ny lohahevitra samihafa. Nifantoka tamin'ny famahanana bilaogy avy any Iraka ny atrikasa iray notarihin'i hamzoz. Nanatrika ny famelabelarana ary nisioka i Muhammad Basheer hoe :
Nanatrika ny famelabelarana nataon'i @hamzoz i Muhammad Basheer. Ny fakantsarin'ny findaiko no namako akaiky ao Iràka. Izy no manampy ahy hamoaka sary amin'ny bilaogiko.
Nanatrika ihany koa ny solontena avy ao amin'ny Creative Commons Donatella Della Ratta ary nisioka hoe :
Nisioka momba ny famelabelarana nataon'i @hamzoz i Donatella (niresaka momba ny… rehefa nampiseho anay lahatsary mahafinaritra momba ny lafim-piainana roa.)
Nanatrika ny famelabelarana nataon'ny mpitantana ny tetikasa vaovao ao amin'ny Rising Voices ao Yemen ny mpandray anjara Bahrainita Amira Al Hussaini . Tena talanjona tamin'ny atrikasa izy:
Talanjona tamin'ny hamaroan'ny bilaogera Yemeni i Amira Al Hussaini (bilaogy 67 vaovao taorian'ny vatsy nomen'ny Rising Voices)
Ny famelabelarana lehibe farany tamin'io andro io angamba no tena nahaliana indrindra. Anas Tawileh, mpanorina ny Meedan nanolotra ny tetikasa fandikan-teny amin'ny teny Arabo-Anglisy. Ilay bilaogera Irakiana Salam Pax no tena nahatsapa izany tao amin'ity sioka ity :
Liana tamin'ny famelabelarana nataon'ny Meedan ny mpanatrika, miloka aho fa mihevitra daholo ireo hoe: mpandray anjara amin'io aho
Nanomboka ny famelabelarany i Tawileh tamin'ny alalan'ny zava-misy mahaliana maro momba ny Aterineto, anisan'izany ny habetsahan'ny ora laniana amin'ny Facebook ao anatin'ny herintaona, izay nadikan'ny mpilatsaka an-tsitrapo aman'ora ary afaka hananganana ny piramida Giza ao anatin'ny 9 andro monja. Nizara ny iray tamin'ireo fampahafantarana iray hafa avy amin'i Tawileh i Amira Al Hussaini :
Nisioka zava-misy mahatsikaiky iray i Amira Al Hussaini (nanontany ny mpanatrika ny mpanolotra hoe iza no efa nifankafantatra antserasera talohan'ity fihaonana ity: betsaka ny nanangana ny tanany.)
Namintina ny Meedan tamin'ny teny vitsivitsy ilay mpanoratra GV Maraokana Marquis Hisham G raha nisioka momba ny foto-kevitra :
Hisham G. niresaka momba ny foto-kevitry ny “translingual web”
Farany, nanamarika tao amin'ny Twitter mihitsy ny Meedan (izay mitantara ny atrikasa ato ) fa hanao fandikan-teny ireo sioka avy ao amin'ny fihaonambe izy ireo (izay ho hitanao ao amin'ny tenirohy #ab09):
Handika teny ireo sioka tamin'ny atrikasa ny Meedan